Bennis, Phyllis translation by Khoza, Sibongile (2006) Wars in the Middle East: What Citizen's Movements Can Do (Zulu Translation). Centre for civil Society Wolpe Lecture Series: -.
IMPI YASE WASHINGTON NASE MIDDLE EAST
Impi yakwa Israel ephakathi kwe Lebanon ne Palestine kube sengathi eyokuzivikela ku Hezbollah kanye no Hamas, ihlangene nokufuna ukubusa kuka-Israel, phezu kwalamazwe; kanye nempi yezigodi efuna ukuzibuyisela kabusha e Middle East. Kulesisimo impi yase-Israeli isiyimpi futhi yase-US. Imbangela yalempi inezinxabu ezisukela ebuqilini be US ebabeka phambili obandlululweni kanye nokucindezela ama Palestine umhlaba wonke jikelele. Lokhu kwaqala ngemuva kokhetho lwentando yeningi ebeyengamelwe uhulumeni we Hamas Palestinian Authority ku Masingana 2006. Ngaphezu kwalembangela, lempi entsha yakhiwe isuselwa kweyase Washington-Iraq, kwimizamo ebekuthiwa eyokuletha intando yeningi e-Iraq.
Kufanele kucaciswe ukuthi lempi iqondene nabantu base Palestine, akukho okuphathekako ngayo. i-Israel iyo elethe lempi. Ukuhlasela kuka Hezbollah ngomhla ka- 12 ku Ntulikazi kulomncele ka Israeli wadicilela phansi isithembiso sango 1949, phakathi kwamazwe lamasha laqanjiwe akwa Israeli nase Lebanon, kodwa ibibekelwe ekutheni igcine la kukheke khona amasosha. Abantu base-Israel ababanjwa babulawa kwakungamasosha kuphela. Uma sibheka ukuhlukumezeka kwabantu ngempendulo yakwa Israeli ebeyibhekekile, lokhu kuhlasela kungaba yilokhu i French Foreign Minister Phillippe Douste-Blazy wayibiza ngokuthi “isenzo sokunganaki”.
Kodwa ayizange iphambane nomthetho wezwe lonke. Ngokwenhlangano ebhekene amalungelo abantu “ukukhethwa nokubanjwa kwamasosha ayizitha kwamukelekile ngaphansi komthetho wezwe lonke owengamele abantu”. Kwakuyimpendulo yakwa Israel eyenza ukuthi lempi kubantu nezakhiwo iqhubekele phambili ngokuqale ibhombe isikhumulo sezindiza sase Beirut. Douste-Blazy wathi lesenzo lesi asihlangene nokuhlasela kuka Hezbollah, wasibiza ngokuthi “senzo sempi engalingali”. Lokuhlasela kwe Israel kukhombisa ukuphatha ngendluzula i-Geneva Conventions Prohibitions engahambisani nokujeziswa, ukukhetha abamsulwa, ukubhidliza izakhiwo zabantu abangekho empini, nokunye. Ukuhlasela kwakuyimpi engekho emthethweni futhi namanje kusenjalo.
Ukuhlasela kwe Hezbollah empini yakwa Israeli nokungaphumeleli kwe Israeli ekuhlwitheni amasosha ayebanjiwe okwenza umncele wodweshu. Izingxabano ezenzeka ezimpambanweni zemincele imihla nemihla umhlaba wonke jikelele, imincele ye-Israeli-Lebanon isibone ngokungaphezulu kwamandla abo. Kepha udweshu awusiyo impi, udweshu womncele nje kuphela. Kuba yimpi uma ingxenye ifuna ukuthi impi iqhubeke. Kulokhu, awukho umbuzo wokuthi indunankulu yase Israeli u- Ehud Olmert nohulumeni wakhe bebefuna impi. iSan Francisco Chronicle nabezindaba baveza ukuthi i-Israeli beyinalepulani kusukela onyakeni ka-2004, mhlawumbe ukuyiqala ngokuphazima ku Lebanon. U-Israeli wayelindele isikhathi esifanele-noma icebo elifanele- ukuyisungula. Kulesi sikhathi, leli cebo, kwasekumele lisetshenziswe.
Izinjongo zeUS kanye ne Israel
Kusobala ukuthi i-Israeli kanye ne US sebevumelene ukuthi abakazimiseli ukunqamula lempi. Umgomo wabo usho ukunqoba empini hayi ukuxazululwa okuhlakaniphile, ngokunganaki kwemiphumela ebantwini. i-Israeli ibonakalisa ngathi ikholelwa ekuthini inganqoba umshokobezi odumile ngempi yokubuthanisa, phezu kwekhulu leminyaka yomlando wabakhayo kwelibuswa ngabakubo eyakhombisa okuphambene kwi US, ku Vietnam, kwi French, ku-Algeria, kwi British, ku-India, nalabanye abaningi.
Izinhloso ze Tel Aviv kuthi yakhe amandla okuphatha impi kuyo yonke imincele, mhlawumbe okufaka phakathi ukuhlala okuqonde ngqo, ukususa konke okukhona noma ukuvimbela okunamandla ukubusa kanye noku guqula imephu yase Middle East. Lendlela lena yahlanganiswa ngonyaka ka1996, lapho khona iqembu elalisebenzisa uhulumeni wase US labhala iphepha elinamasu, ibhalela u Bibi Netanyahu, abengenele ukhetho lokuba undunankulu yase Israeli. Leliphepha lanikezwa igama elithi “ukuqala okusha/okuhlobile:Ukuvikela Ubukhosi”. Futhi leliphepha lahlongoza ukuthi i-Israel eyi Middle East ephathelane nezifunda le Neo-Conservative Project ye New American Century, kanye kakhulu i-National Security Strategy sango 2002, sa Bush, eyafaniswa i US mhlaba wonke. Ingqikithi yalamacebo yabiza ukuthi ubukhosi okubusayo bakhe umbusazwe onamandla lapho khona kungeke kube khona ukuphikisa nasesikhathini esizayo, okungenza ukuthi kungabi nendlela yokuthi abekwe induku.
Kulezinsuku ezimbalwa zodweshu, kwavela umfantu enhlosweni ye Israeli ne-US. Imigomo ye Israeli beyiyikuthi (solo ingiyo) iyempi kakhulu kazi, iqonde ukushabalalisa zonke izikhumbuzo ku Hezbollah noHamas, ngaphesheya kwe Lebanon, iPalestine kanye nezifunda.
Ngesikhathi ibithemba uzoletha uhulumeni wase Lebanon ngobunono, kade ibugqila kwaka Washington njengoba i-US yahlela ukuphindela emuva kwemabutho ase Syria kulonyaka odlule, la abengaphansi kemphatho yakwa Israeli ngokupheleleyo. eGaza i-Israel yazama ukunciphisa amandla okuphatha kwe Palestine lebelivele linciphile. Ngaleso sikhathi, inxenye yabaphathimbuso baka Bush, yabonakalisa ibeka umthetho ophakeme ekulondolozeni ingxabana yeSyria iphume kuLebanon yabeka umthetho wentando yeningi. Futhi ukuhlalisa okunye okungafananiswa ngento eletha ukusimama e Lebanon yasa iyinhloso yekusakaza inkolo ethize. Lokhu kwaholela emibikweni engemihle ezinsukwini ezimbalwa, lapho khona, “i-Israel inelungelo eliphelele lokuzivikela” yathambiswa ngukuthi “kepha kufanele baqaphele ukuthi banganciphisi amandla ohulumeni we Lebanon. Nokho lona mthinziyelo awuzange uhlale isikhathi eside. Elangeni lesithathu abaphathimbuso baka Bush bayeka ukuzihlupha “ngekubusa ngentando yeningi yase Lebanon indida (akuzange naka nci kube khona ukuzihlupha ngabantu base Lebanon) kanti futhi bese iqhubekile ebangeni elikhulu ukusingatha ukususa uthuli kwe Israel, yenqaba imiyalelo yokuqeda impi njenga “engekho esikhathini”.
Yini Lokho Okufunwa iWashington?
Uhlobo lwezinjongo ze US azifaki ukuqeda noma ukunqamuka kwempi ngokushesha. Kodwa iWashington izimisele ukudwetjwa kabusha imephu ephathelene nesifunda ze Middle East, lapho khona i-Israel ihlose kuhlasela. Ukubusa kwaBush kwaqala lenqubo ngekuhlasela nekuphatha izwe lase Iraq, kanye nekwesekela into eyenziwa i-Israel. Lokusekela i-Israel kubonisa ukweyisa kwe-US ekukhombile kubantu base Iraq abangekho empini.
Ngenkathi ingxenye yabadlali be Neo-Con ababalulekile kwi White House “Paul Wolfowitz kwi World Bank, Douglas Feith eGeorgetown, Scooter Libby osekuqaleni, nokunye nokunye), kusobala ukuthi ingxenye yemicabango yabo; ukubukaphansi ukuzwana kwamanye amazwe, ukukholelwa ukuthi kuliqiniso ukusebenzisa izikhali-ngaphezu kwakokonke-akushintshi. Okwenziwa yi-Israel isekelwa i-US ngakwezemnotho, ngekwembusazwe, nokusekelwa kwezepolitiki, kungumgomo wekudwejwa kabusha i-Israeli entsha eyengamela iMiddle East. Leyonjongo iyahambisana nokuphathwa ngesihluku kwe US, kanye nokuhlasela i-Iraq okunenjongo yokwakha kabusha isigodi esingeke siphikisane nokuphatha kwe US.
Ngokuka Washington, impi yakwa Israel inikeza iSyria ne-Iran umfutho wokuqhubeka phambili nempi. Futhi kubonakala sengathi iUS izoqhubeka ithathe inkudla. Kwakunokukhononda ngokuthi i-US yayinyathela ngolonwabo ekutheni ithathe izakhamizi zase Merika izisiye ezindaweni zokuhlala eziphephile. Lokho kungaba ngaphansi kokunganakekeli kunokuthi i-US ikhuthalele ukuletha izikhali zokulwa kumncele oselwandle eBeirut. Singabona leyomikhumbi ihlezi emnceleni oselwandle eLebanese isikhashana,njengombiko kuSyria neIran.
Ngokunjalo okubonakala kuliqiniso ngendlela iWashington yakha ngayo ipulani yokuthi i-US ingavuma ukunqamuka impi lebeyikhona ezinhlanganweni zezizwe. Kulesi sikhathi i-US ayivumelani nokunqamuka impi, lokhu sekulimaze iSecurity Council. Inhloko kahulumeni seyethule uhlelo lwe mibono yokuqeda impi. Abanye abasebenzi balenhlangano yezizwe, abafana no Jan Egeland kanye neHigh Commissioner yamalungelo abantu u Louise Arbour bakhulume ngezimpi ezenzekako, futhi bafune ukuziqeda ngokuphazima kweso.
Ngokusho kwenxusa laseMelika uJohn Bolton, kubukeka sengathi iMelika ne Israel bacabanga ukwamukela isithulo senhlangano yezizwe sokuba kuthunyelwe amabutho omhlaba wonke-hayi ama Blue-helmets.
Kusobala ukuthi indima edlalwa i Hezbollah kulesikhathi esisengozini esezingeni eliphakeme kusekela lenhlangano. Oku ngaphakathi kwe Lebanon okusho ukwesekela iHezbollah ngezepolitiki nezenhlalo, futhi neziphathelene nendima yokuvota epalamende ye Lebanese, kanye nokuthi ukusekela amasosha eHezbollah ngokuhlukana kwa masosha elizwe lase Lebanon, kungahle kube yinto enhle.
Ezigodini zizonke, iHezbollah ithola ukudunyiswa okwesekwayo ngendima eyidlalayo ekusekeni amaPalestina, (kakhulu kazi ekuzameni ukwenyusa izinga lethuba lika Hamas lokushintsha kweziboshwa) kanye nokubaluleka kakhulu ekuqhudelwaneni ukuphathwa kwe Israeli kusetshenziswa izikhali. Kulesikhathi uhulumeni wama-Arab phesheya kwe Middle East esala engenamfutho futhi ethule ekuvukeni ekuhlaseleni okuqhubekayo, futhi abantu ezigodini bayangokuthukuthela ngohulumeni wabo obonakala ezibandakanya ngendlela ethulile. Ikhono laHezbollah ekuqhudelaneni ne-Israeli kusetshenziswa izikhali kuletha abaseki nokushintshwa kwezinto ngendlela engavimbeki. Lokhu kugudluka kokunakeka kwezigodi nakho kuyavezwa kokunye okubalwa ochwepheshe bama-Arab njenge “siphetho sekwesaba” phakathi kwabantu base-Arab.
Abaphathimbuso bakaBush, babonakala beqaphelisisa lokhu, okuthiwa inecebo ohambo lwaCondeleezza Rice yomhla zingu-23 ku Julayi oluya ezigodini okuvulweni kwe “Umbrella yema Arab Allies” ekuphikisaneni okugqamile kwi Hezbollah. Ukukhula komthelela wokunyakaziswa kokuziphindiselela kwe Lebanese, uhambisana nalowo we Hamas, iseyenze ukubhekana okunzima kubaphathi be pro-US Arab, asebevele beyicabangela ngokungayihloniphi ngokweyisa ngamangcozu abalulekile. Ngokuvezwa kwezithombe kumabonakude, zabantu beHezbollah abayinxenye yeqembu ezilwelayo ezama ukushintsha uhulumeni ngokwenza izimpi ngokushesha ezingalindelekile ezenzeka kwa-Israeli, kanye namanwele abantu abahlushiwe base Palestina ne Lebanese, lapho khona ukubhonjwa kuseyinto ensha ezinqondweni zabantu bakwa Israeli, ukungafisi kanye nokungaphumeleli kukahulumeni we-Arab okweza noma yini ukusiza amaPalestina ne Lebanese, ingasaphathwa eyokubhekana ne-Israeli ngokwabo, kuma njengesizathu sokusoleka esisemqoka kulokho kubusa kuzekuyophuma eMiddle East. Umphumela wenkinga impela, ukuthi izigameko zamanye nazo zigqugquzela ukusabalaliswa kwenkolelo-inkolelo engesilo iqiniso eyingozi. Ngokubona kwami-kungenzeka ukuthi ukunyakaziswa kokuziphindiselela kukho konke ukuze kunqotshwe i-Israeli. Kuliqiniso ukuthi iminyaka eyi-18 yokuziphindiselela kwe-Hezbollah ku-Israeli eningizimu ye Lebanon yaphoqa ukuphuma kuka Israeli. Kepha leso sibonelo saba nemininingwane eminingi engeke yaba nomthelela- yathatha indawo ngaphambili kumhla ziyi 11 ku Septemba ngenkathi ukumbandakanya kwesigodi seUS sehlukile. Lokho kuzimbandakanya kwe Lebanon akuzange kufane nepulani ayayenzelwe i Palestine.
Impi ye Iraq seyiqalile ukushintsha ukuqwashiswa kwesigodi ngezepolitiki kunethuba lokuthi abanye esigodini bangabheka ukuthi amabutho alapho alwenjani nempi yeUS awamisa nya. Futhi cabanga lawo maqembu amancane alwa empini angalandela leyomfanekiso ukuze behlule i-Israeli kwi Palestine ngokunjalo. Umehluko futhi kubalwa iqiniso eliwukuthi ukulwa kwe-Iraq kwenza ukuthi bathole izikhali zamasosha konke lokhu kudlula ngobukhulu ukufana okugcina kufana ukuthi ukukhula ngokulinganayo kwembhubhiso kwi Lebanon ne Iraq.
Abalekeleli/Izivunani ze Arab
Kwezepolitiki, impi eliwayo eLebanon ishintsha isigodi ekulimaleni kahulumeni we-Arab. Kuyakhunjulwa ngokuziqhenya nokudinwa phakathi kwe Middle East ukuthi ukukhishwa kwamabutho akwaIsraeli esuka eLebanon, Hezbollah lwakuwokuqala kokulwa kwe Arab ekwenzeni ukuthi i-Israel ihlehlele emuva, lokho kwehlula bohulumeni bemaArab bahlanganisiwe, abakhonanga kukwenza. Evikini lwesithathu ku Julayi kuveza ukukhula nenqubeko kwekuhlukana bebukhosi kwema Arab.
Ngalolunye uhlangothi yilabo bohulumeni ababona ukukhula komthelela we Hezbollah njengendlela awukusabisa emandleni abo futhi bafisa uku sola iHezbollah futhi okungenani beseke inhlangano ye US ne Israel, kubalwa lapho i Jolidani, Igibhithe, i Saudi Arabia kanye ne Kuwait.Ngakolunye uhlangothi yilowo hulumeni okhathazeke kakhulu ngokulahlekelwa amandla nokulawulwa kwabantu babo abangafisi ukushintsha ukungaboni ngaso linye ne Israeli naba kanye ne Hezbollah, abathi (okuliqiniso nokungesilo) ukweseka ama Palestina nama Lebanese alwa neIsraeli. Labo babalwa ne Syria impela, uhulumeni wabo osele ukuthi futhi wesaba kakhulu ukunyakaza ngenxa yokusatshiswa i-US ngisho noma ngenkathi abantu bonke bacindezela osekelo lwabantu kwe Hezbollah nama Palestina. Lelo qembu liphinde lifaka nabangesiwo ama Arab Iran, uhulumeni wabo obaqaphelisisile empendulweni yakhe, acabanga ukuthi izophendula ekuhlaseleni kuka-Israel ku Syria, kodwa kusala kuthule ngokucacile ngendima yabo eyi-vis-à-vis kuhlasela e Lebanon.
Isandiso samanje nesethusayo kulokuhlolisisa kweIsraeli ngumongameli wase Iraq u Nouri al-Maliki. Ukuhamba komholi we-Iraq ekhempini yase US ibonisa ukunqoba okubalulekile kupulani yabaphathimbuso bakaBush ngeLebanon. Okhethweni oluhlelwe i US, u al –Maliki wayethembisile kwasekuqaleni ukufuna indlela yokuphuma kwamaqembu e-US e-Iraq, kodwa akazange asifeze isethembiso. Okumangalisayo ukuthi ngisho nondunankulu wakhe iLebanon u Fouad Siniora, ekugcineni waqonda ukuba umkhiqizo wenkululeko ka Washington’s anti Syria crusade, ibonakala iphumile emakhempini e pro-US, bacacisa ukuthi bazolwa ne Hezbollah ekuziphindiseleni ekusatshisweni yi Israeli ekuhlwitheni i Lebanon. Amanye ama Lebanese anamandla amemezela ukusekwa kweHezbollah, ukweyiwa komfutho kade benawo uhulumeni weLebanese onempumelelo ukuze kuvimbeke umthelela. Kwesinye isigodi, abantu bezombusazwe kumazwe amaArab anguPro-Us kubalwa uSaudi Arabia oseqale umfutho wokuziqhelisa kuhulumeni wabo.
eGaza amandla okubaluleka amalungiselelo obumbano lwe Hama-Fatah kwi Palestina Authority eyakhiwe ngokwamukela yiwo wonke amalunga e Prisoners Declaration ngo Juni asehlile kakhulu. Ngesiqiniseko amalungiselelo obumbano asabalulekile kodwa ngenxenye yesigamu samalunga ekhabhinethi ye Palestinian Authority namanye amalunga amaningi e Legislative Council abanjwe emajele ase-Israel kodwa babanjwe emajele lokuthi bangakwazi ukukwebelana ngabo ngesikhathi esizayo i-Israel ne US bahlanganisa. Umbimbo oluhlanganiswe i-US ne Israel lokukhipha inyumbazane nokungahwebelani komhlaba wonke jikelele lisaqhubeka. iPA ngobuyona ayiyi phambili, abakwazi ukusiza inani labantu ibhekana nobuhlungu bokuhlaselwa i-Israel. Uhulumeni oholwa iHamas ezindaweni ezinabantu ubuye abhekane nezinqinamba zepolitiki zangaphandle. Ukuholwa kwe Damascus kubhekeliwe ekuhlukanisweni kwezinhlangano, lapho inxenye yabo beyikholwa ekutheni ibixhase kakhulu iHamas oshintshweni lomsebenzi wempi kunokuzichaza kwe Hamas kuhulumeni weGaza ne Ramallah. Ngokwamanje, ukuxhumana okuphakathi kwezinkinga zeGasa zisaqhubeka kanye zinkinga ze Lebanon/Hezbollah zenze ukuthi iPalestine ibuyele emuva kwezepolitiki lephathelene nesifunda.
Endleleni yokunyusa ukuthembeka kukaHamas njengonqonqoshe wezamapolitiki ePalestina, kodwa lendlela isigudlule ukubaluleka nokulunga kwe- Palestine liberation organization noma i-PLO. U Hamas akaze abe ilunga le-PLO njengo Hamas prestige ukubaluleka, phakathi e-Palestine nasemazweni angaphandle, kunengozi yokuthi i-PLO isala ngemuva, kanye nayo, nokumelwa nalabo basezweni lasePalestine abebengahlali e-West Bank nase Gaza ebithathiwe. Okubaluleke kakhulu izithuthamthwalo zase-Palestine kanye nabaxoshwa asebedlule inani elingaphezu kwesigidi ezithathu besakazeka mhlaba wonke.
Inkinga ye-Gaza ne Lebanon kanye nempi yase-Iraq
Ukuthi inkinga yase Lebanon ( i-Gaza ne-Palestine iyonke ibivele ngempela isenkingeni ) iyithinta kanjani indlela i-US eyenza ngayo impi yase Iraq ayikakaziwa namanje. Kodwa ushintsho esilenzile isivele icacile. Isiqephu kwi-New York Times sibone ukuthi abacwaningi babona ukuthi ukusiza i-Israel kulempi kufana nokwe Iran isiza i-Hezbollah. Futhi nabaphathi mbuso baka-Bush isanda kuvumela ukuthengisa kwezikhali za-$6 billion kumongameli othukile wase-Saudi, kuhlanganiswa izindizamshini zema black hawk, kanye nezikhali zempi. Labaphathi mbuso bathi ku-congress ukudayiswa kuzosiza ukuqinisa ezempi zase Saudi Arabia namandla ayo okusiza i-US ilwe nekuphoqa ngenkani emhlabeni jikelele.
Kusobala ukuthi lokukuqonda kubulala iLebanon neGaza kanye nangokuzazi kwesivumelwano se-US kwenza ukuthi kukhuphuke intukuthelo e-Iraq kwi-US lokhu kungahle kulethe ukunyakaza kwesimo sempi phakathi e-Iraq amabutho ase-US angeke kunganakwanga ukuthi yonke iLebanon ihlushiwe ngalempi iShi’a yaseLebanon kanye namadolobha eShi’a amaningi nalawo aseningizimu asevele ebanga ukuhlupheka kakhulu nobumpofu, njalo iHezbollah esibonakala njengesifunda esivikela iLebanon kanye nePalestine, nama-Arabs ayiyo inhlangano yeShi’a . Ukubhekela ezenkolo kungenzeka zigcine zilandela kokubaluleka kakhulu ukuthi bonke abantu baseLebanon okuhlanganisa amaSunni, nabakrestu kanye nabanye okuhlanganise nabaseGaza abaxina iSunni (kanye nabasePalestine abase West Bank abasahlukumezeka ngokucindezelwa abezizwe ezweni labo) sebenziwe izihlushwa ngenxa yemithetho ye-US ne-Israel yokubukela abantu phansi.
Isusa lokuhlasela kwe-Israel eLebanon noma yaba kuhlala kwezikhathi zonke noma qha kuqinisekile ukuthi izokhuphukisa lesisikhathi esisengozini lokho kuloqiniso kwa-Israel ekwakheni lokho iTel Aviv ikubiza ngendawo yesidutshwa phakathi eningizimu yeLebanon. i-Israel seyizithathela inkulumo yobandlululo Pentagon e-Iraq befanekisa umgomo wabo odinga ukwesuswa ngokuphelele isiphepho saseningizimu yaseLebanon. Bese bezibambela njengoba uKofi Annan asho ngomhlaka 21 kuJulayi noma ngabe i-Israel inecebo lekuthi lendawo isizoba yindawo yokuhlala impi entsha kanye nohambo lweUS lokuthula.
Impi entsha kanye nenhlangano yokuthula ye US
Akunambuzo sekukonke ukuthi, ukunyukela kwenkinga yesikhathi sengozi ezigodini ekuhlanganisa impi e-Lebanon nase-Gaza izokwenza umsebenzi wezinhlangano zekuthula ibe nzima kakhulu. Kuzoba nzima kakhulu ukubiza ukubuyiswa kwamabutho ase-Iraq ekhaya manje. Njengoba amanga abezindaba egxila ekuhlaselweni kwe-Israel. Lokhu kuyiqiniso impela ithonya yenhlangano nabanye abenza amapolisi. Lapho ukugxilwa e-Israel kunyusa ukufukunyelwa kwempi yase-Iraq kubaphathi abakhona bentando yeningi. Futhi kulesikhathi lapho khona okuyiwona mariphabhuliki ebonakala sengathi ayaziqhelisa emaqhingeni impi yakaBush. Uma kungeyona eyempi uqobo, lenkinga entsha inikeza amariphabhuliki ithuba lokwamukela indawo yebaphathi mbuso baka-Bush. Bebe beqhudelana nalabo bentando yeningi ekutheni ubani ongaba umsekeli oqinile we-israel. Ukhetho oluyimfihlo lwesigale kanye nokhetho olusamfihlwana lwangaphakathi oluvumelana nempi ye-Israel ikhombisa likho ngokucaca nangomfutho.
Kodwa kumele singasoze sikhohlwe intengo, ukulunga nokubaluleka komzabalazo ongenasihluku. Njengabantu basemelika umlando wethu usubone izimpumelelo zethu ezibaluleke kakhulu-ezilwisana nobugqila, amalungelo okuvota, amalungelo ezonhlalakahle atholwa ngokukhulu ukuqoqana nokufundisana. Ngeke sikwazi ukuma manje.
Kufanele ukuthi sikhumbule futhi sithole ukuthi yini into edumile ingafani nento engekho bucayi kubalandeli be-Israel eyakha ezepolitiki ephakeme amalunga omphakathi amaningi awakufuni ukusondezwa nokufukanyelwa emphakathini kwe-Israel yabaphathi mbuso baka-Bush. Becela ukuthi i-US ingangeni empini. Kwabaningi lokhu kuwukuphikisa ukuphinda kokuzifaka kwe-US ekulamuleni e-Middle East. Okushodayo ngempela ulwazi oluchithekile ukuthi i-US isizana nempi yase-Israel nokuphucwa indawo kanye nemali engaphezu kwa $3 billion ngonyaka ngamunye emasosheni kanye nosizo lwezimali, sekuyiyona ndawo yamapolitiki ase nomangabe iletha uxolo noma cha, isiqiniseko ukuthi isingenile endabeni.
Ucwaningo lukhombisa ukuthi umphakathi unolwazi oluzinzile kubantu bezepolitiki. Kunedlanzana labantu ba-congress, likhombisa lobobunzila asebethathe isinqumo ukungangeni ekubongeleni i-Israel bathi cha noma yebo esixazululweni. Iningi lalabobantu baphinde futhi bavumelane nomthetho osavivinywa owaziswa u-Dennis Kucinich ebiza ukuhoxiswa komlilo ngokuphuthuma.
Esinye isizathu esenza umphakathi uvume umonakalo owenziwa impi ye-Israel ingaba okuvela kumabonakude. Ngaphandle kokuziqhenya ngezwe labo kwabaningi bezindaba (njengoba iningi lezintatheli zamabonakude ezisemazweni aseLebanon naseGaza esikhathini esiningi ebanjwa ) ukukhombisa kwabo isihluku ezithombeni yenza umhluko omkhulu kunezinkulumo.
Uhlobo lwesikhathi senkinga kanye nempendulo kuyona ikukhombisa futhi isidingo semfundo njengeqhinga elibalulekile kwi embhikishweni yethu. Ngempela kumele sizimbandakanye nalaba abasemandleni, futhi nemibhikisho ephuthumayo ibalulekile ku Bush, Ramsfield, Rice kanye namanye amalunga ombuso afuna ukuhoxiswa komlilo umhlalaphansi emahhovisi abantu abavumela impi emalungeni ka-congress, imibhikisho ephikisana nobugebengu bezimpi e-Israel e-White House.
Lombhikisho ubaluleke kakhulu kubantu base-Middle East ikakhulu labo base Palestine nase-Lebanon njengoba kwakunjalo e-Iraq ukuthi kunabantu baseMelika abathi “cha!” ohlelweni luka-Bush. Onqaba isimo sempi kanye nokuphathelene kanye nohlangothi olulodwa kanye nokusweleka kombuso wentando yeningi okulethe ukunyuka kwalezimpi.
Futhi kumele senze okungaphezulu. Sibhekene futhi nabantu baseMelika abavuma ukwamukela incazelo yamaphephandaba yalesikhathi esisengozini bavuma ukuthi kwaqala ngokuhlasela kuka-Hezbollah ngomhla ka-12 ku Julayi owathumba amasosha amabili ase-Israel. Abantu abaningi baseMelika ababoni ukuthi lesisikhathi esisengozini saqala kudala, ngokuhlukaniswa komhlaba wonke kanye nezinkinyabezo ebeziholwa i-US iphambene nabo bonke abantu base-Palestine emuva kokhetho luka-Hamas. Lokhu bekuhambelana nokubulawa komndeni wase-Palestine olwandle lwaseGaza, nokuhlaselwa ngenhloso osekubulale isigungu sabantu esingaphezu kwa-125, nokubulawa konqonqoshe osanda kukhethwa ePalestine abaqhutshwa nguHamas. Kusobala ukuthi abantu abaningi baseMelika abakuboni lokhu. Umsuka walesisikhathi esisengozini usukela ekubanjweni kweziboshwa ezingu 9,000 zase Palestine emajele ase-Israel, noma lokuphatha iGaza iminyaka engu 38 noma impumelelo yeminyaka engu 18 laphe khona i-Israel yaphatha izwe leningizimu Lebanon.
Sibhekene nabantu baseMelika abaswele ulwazi lokuhlehlisa loluhlelo lwezikhathi lokwenza izinto ezihambelana nesikhathi esisengozini yabasaba ukuhlakanipha oku- kugabadela noma iphephandaba elibizwa ngokuthi i-New York Times yabhala ngohlelo lwezikhathi ngomhla ka 19 kuJulayi, itikili lephephandaba lamhla ka 24 Julayi laliveza iqiniso ukuthi akekho noyedwa umuntu wase-US obonakala sengathi ubamba ukulandelana kwalezi zinhlangano iHezbollah yeqa umncele wase-Israel lapho khona abamba amasosha aka-Israel amabili, loluhlaselo lwaba isimo sempi ehlosiwe. i-Israel yaphendula ngokulinga ukubuyisa lamasosha kodwa yehluleka yase iqhubeka ngokushesha ngemidukezo yezindiza eLebanon kulabangekho empini, baqala ukuhlasela amabhuloho aseningizimu alandela ngesikhumulo sezindiza saseBeirut. Emva kokuthi i-Israel iguqule isimo semncele isenze impi kanye nesimo sokuhloswa kokubulala abantu abangekho empini kwenza ukuthi iHezbollah iqale ukuqhumisa iziqhumiso kubantu nasemadolobheni ase-Israel.
Esikhaleni iningi labantu baseMelika basamile enkolweni yokuthi i-Israel ihlezi ilungile namanje basakholelwa ukuthi ukuhlasela kwe-Israel eLebanon kuwukuziphindiselela ngenxa yesinqumo seHezbollah esawela kumadolobha ase-Israel. Njengababhikishi kumele sithathe umthwalo wombhikisho omkhulu wokufundisa abantu abaningi khona kungeke kukwazi ukuthi ukwanda kolwazi okungasilo ukuthola nokubamba iqhaza ekwaziseni umphakathi.
Lesi isikhathi senhlangano ephikisana noma elwa nempi kanye nenhlanganisela yamazwe ukuthi aqinise ukubambana nalezinye izinhlangano ezilwela amalungelo asePalestine ngokuphikisana kokusekelwa kwe-Israel i-US, ukulwela amalungelo abantu kanye nokuthula kulesi sifunda. Lenhlanganiselo izophinda futhi phezu kokunye ukuthi asivumeli okusabekayo futhi nokubukeka komhlaba empini yaseLebanon. Ukucindezela isikhathi sobunzima eGaza kanye nokuphatha kuka-Israel okusabekayo eWest Bank nase-Arab East Jerusalem kumele kuphume ezinhlosweni zethu.
Imibiko yokuthi impi yaseLebanon yokuvimbela ukuphoqa ngenkani enyukela kwi-US kanye nabangani bayo ingayihlehlisa lendlela kufanele sithathe umsebenzi wokufundisa umphakathi nge-polisi yase-US, ukuthi ifikisa kanjani empini nokuthi kungani loluvalo oluse-Gaza nase-Lebanon kuyimpi futhi yase-Washington. Kumele sizikhumbuze thina kanye nabanye ukuthi kungani impi ye-US engekho emthethweni e-Iraq ibhibhizela iphakamisa umbono wokuthi ukuhlasela nokuthatha elinye izwe sekuthathe indawo yokuxoxisana nokuhloniphana.
Lesi sikhathi sengozi edlulele, futhi isikhathi sethuba. I-Commissioner ye-UN enkulu yamalungelo abantu uLouise Arbour, itshele umhlaba ukuthi ubugebengu bezimpi benziwe emacaleni womabili, waxwayisa nokuthi abaphathi bezepolitiki bamazwe angabalandeli bangathweswa bona icala. Ababhekele amalungelo abantu e-Lebanon batshele i-API ukuthi basaphenya ngamacala ezimpi ase-Israel. Kumele silibambisise lelithuba ukucindezela umongameli wethu kuthi avume icala ngeqhaza lakhe emacaleni empi ase-Israel ngokunikeza izimpahla nezikhali zempi kwi-Israel, bazi ukuthi zisetshenziselwa ukuphula imithetho yamazwe omhlaba nowakhona phakathi e-US. Futhi kuyithuba lokwakha ubudlelwane namazwe ase-Europe, Latin America nakwezinye izindawo. Uma sicindezela ukuboshwa kwabasezikhundleni eziphezulu kuhulimeni ka-Bush.abavumela amacala ezimpi e-Israel; indlela ye-Belgium, Brazil namanye amazwe avimbela abathweswe ngamacala ezimpi ekungeneni emazweni abo kumele kube indlela esiyisebenzisayo kubaphathi be-US abaphakamisa impi yamanje.
Izwe lethu, impi yethu?
Ekupheleni kosuku lesi sikhathi okumele sivume siphinde sikwamukele ngokukhulu ukudabuka. Lokhu kuthina ngendawo yezwe lethu uma abaphathi bethu abaphezulu uma beshiya ukuxoxisana ngoxolo kalula nje? Sithi bakha usiko elivumela isihluku esingacabangeki? Sithi basebenzisa amandla empi nomnotho wabo emhlabeni ngokubulala, baphuce, bahluphekise baphinde baphuce abantu amandla, baqhelise abantu base-US nomhlaba ngokuyisa izwe lethu empini bese sima eceleni engathi asazi lutho emhlabeni wonke? Ukuthi umthetho womhlaba ushiwe ngenxa yomthetho wenhlanga? Lokho kuthini ngathi njengabantu?
Futhi kuthini ngombhikisho wethu, nalokhu okumele sikwenze?